लोक नृत्य - संसारभरि यात्रा
नृत्य जहाँ चित्र, को ताल आन्दोलनहरु द्वारा बनाईएको हो द्वारा संगीत र ध्वनि प्रभाव सँगसँगै प्राचीन कला, छ। धेरै फरक बीचमा नृत्य को प्रकार (खेलकुद, शास्त्रीय, पप, आधुनिक) सधैं एक विशेष ठाउँ लोक वा लोक नृत्य कब्जा गरेका छन्।
इतिहास र लोक नृत्य को सुविधाहरू
यो पहिलो नृत्य बाहिर संसारबाट मानव भावनात्मक छाप अभिव्यक्ति प्राचीन समयमा उत्पत्ति भएको ज्ञात छ। सुरुमा तिनीहरू बाहिर संसारमा देखाए, प्राकृतिक घटना, अनुकरण जनावर इशाराहरू, वनस्पति प्रतिलिपि। निम्न मा नृत्य चाल बारम्बार सुविधाहरू प्रक्रियाहरू काम। विभिन्न climatic अवस्थामा बाँचिरहेका विभिन्न nationalities, फरक विकसित भएकोले बिस्तारै राष्ट्रिय नृत्य, बस केही बाली को विशिष्टता देखाउँदछ देखा परे।
यो लोक प्रकारको कला परम्परागत आन्दोलनहरु, वेशभूषा, संगीत, rhythms विभिन्न सेट छ। यसको मुख्य विशेषता सांस्कृतिक मान, जीवन, व्यक्तिगत राष्ट्रका ऐतिहासिक विकास एक प्रतिबिम्ब छ। यसलाई साथै सम्भव जोड रूपमा लोक नृत्य लिङ्ग मतभेद, को sexes सम्बन्ध छ। मानिसहरू अक्सर मानिस-विजेता, रक्षक को एक छवि बनाउन, हतियार, वाद्ययन्त्रहरू मा नृत्य, जीवनको गति सेट। महिला सामान्यतया प्रतिनिधित्व, हातमा रुमाल, फूल, घरेलू वस्तुहरू आयोजना गरिन्छ चूल्हा को अभिभाबकहरुको। नृत्य साथै, तपाईं उनको जीवनको peculiarities र जीवनको पनि ताल थाह प्राप्त गर्न, देश को विकास को इतिहास पहिल्याउन सक्छ।
अन्य कुनै पनि लोक नृत्य जस्तै यसको आफ्नै peculiarities, विशेषता आन्दोलन छ। तर, यो को विशिष्टताको यी सुविधाहरू प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक राष्ट्र को लागि विभिन्न हुनेछ भन्ने छ। यो र शैली को जटिलता मा, डान्सरहरू बस, सुन्दर मनोरम हुनुपर्छ रूपमा, कुनै पनि आन्दोलन संगीत अनुरूप हुन र रंग प्रतिनिधित्व nationalities विचार गर्नुपर्छ। एकै समयमा, लोक नृत्य, डान्सरहरू परिवर्तन को स्वतन्त्रता दिन्छ आफैलाई संसारमा कहीं पनि फेला पार्न जस्तै अनुमति दिन्छ, र नै समय मा साथ पूरा गर्न यो यात्रा र दर्शक। तसर्थ, लोक नृत्य - यो आन्दोलनहरु को विशेष मात्र छैन। यो पनि सबै सँगै हुन्छन् र एक राष्ट्रको चरित्र सिर्जना जो वेशभूषा, संगीत, विस्तारित विशेषताहरु, एकता छ।
बच्चाहरु र वयस्क लागि लोक नृत्य
आज, क्लब, स्टूडियो, विद्यालय शिक्षा नृत्य मा लगे, एकदम धेरै र आमाबाबुले अक्सर एक विकल्प संग सामना गर्दै छन्: ठ्याक्कै यो कला मन रुचि के। दुर्भाग्यवश, विकल्प लोकगीत को यस्तो किसिम मा अक्सर हराउछ। आधुनिक र विभिन्न नृत्य गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको र ब्यालेट - - मनोरम थप, सुशील खेलाडी जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा, लोक नृत्य - यो अत्यन्तै रोमाञ्चक कला रुप हो। उहाँले विकास हुनेछ समन्वय, लचीलापन को विकास गर्न योगदान, मुद्रा को विकास, समग्र भौतिक विकास मा एक लाभदायक प्रभाव हुनेछ। तर यो पनि मूल डेटिङ संग, आफ्नो पैतृक देश को संस्कृति संग familiarizing को एक उत्कृष्ट तरिका हुनेछ। ल्याटिन अमेरिकी Incendiary, उत्तेजक युक्रेनी, पोलिस र अन्य मानसिक: संसारको विभिन्न द्वारा प्रदर्शन गर्ने लोकगीत नृत्य मा एकै समयमा। जो तपाईं लोकगीत नृत्य को भाग बन्न अनुमति दिन्छ छवि र संस्कृतिका यो सेट।
कलात्मक निर्देशक बच्चा पहिले नै राम्रो आफ्नो आन्दोलनहरु अझै पनि एकदम निंदनीय समन्वित गर्दा, तर, नजिक गर्न पाँच वा छ वर्ष नृत्य गर्न सुरु गर्न सल्लाह छन्। तर, केही अवस्थामा, तपाईं पहिले (3-4 वर्ष) सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबै छोराछोरीलाई ध्यान एक बराबर रकम दिइएको हो भनेर यो कक्षाहरू नै उमेर समूहमा आयोजित थिए महत्त्वपूर्ण छ। उद्देश्य एक पेशेवर नृत्य पाठ छैन भने, तिनीहरूलाई भ्रमण तपाईं वयस्क, उमेर सहित सुरु र पछि गर्न सक्छन्। मुख्य कुरा हो - को सिर्जना तस्बिरहरू देखि संगीत, को आन्दोलन, आनन्द छ। र संसारभरि कि अचम्मको यात्रा राष्ट्रिय नृत्य दिन सक्नुहुन्छ।
रोचक ताजिक नाम
अरब महिलाहरु: जीवन, वस्त्र, उपस्थिति को एक तरिका
Cyberpunk - नयाँ subculture
मानव जीवन र समाजमा दर्शन भूमिका
14 वर्ष को लागि एक केटी के दिन? के तपाईं 13, 14, 15 वर्ष पुरानो (केटी) मा एक बच्चा दिन सक्छ?
Tequila - tequila छ ...: इतिहास, संरचना, नियम र प्रयोग को peculiarities
संयोजी ऊतक मालिश: वर्णन, विधि र समीक्षा
Zeus - जो छ? Zeus: प्राचीन ग्रीस को पौराणिक कथाहरु
चपस्टिक। चपस्टिक कसरी पकड
जम्माबाट फ्र्रिङ प्यान कसरी धोएर? जम्माबाट कास्ट आयरन, एल्युमिनियम वा Teflon प्यान कसरी सफा गर्ने?
पैसा को विकास
"फूल" - आफ्नो खुट्टा केटी मा एक टाटु